Ummeli weMichigan Cannabis Scott Roberts Law Ukhuluma nge-MMFLA no-LARA
Ummeli Webhizinisi Lama-Cannabis waseMichigan - uScott Roberts
Camabhizinisi e-annabis eMichigan ayaqala lapho uMbuso uqala ukuthatha izicelo zamabhizinisi ezokungcebeleka ngoNovemba 1, 2019. UMichigan ubhalise ukusetshenziswa kwabantu abadala ngo-2018 ngamavoti angama-56% kodwa kubikezelwa ukuthi ibhizinisi lokuqala lokungcebeleka ngeke livule kuze kube yiNtwasahlobo 2020. Kuleli sonto uMiggy noTom bajoyinwe ngu ummeli webhizinisi le-cannabis Scott Roberts ovela UScott Roberts Law ukuxoxa nge-cannabis landscape yaseMichigan.
Lapha eMichigan, imithetho nemithetho ye-cannabis ihlala ivela futhi ukwenziwa kwemithetho kuzoshintsha ngaphandle kokuqashelwa. The I-MRA (I-Ejensi Yokulawula iMichigan) elawula insangu, kwesinye isikhathi ingavele iguqule ukufunda kwayo ezintweni futhi ngaphandle kokuthi ubambe iqhaza kuyo ngeke wazi. Kunolwazi oluningi kuwebhu kepha uma lungaphezu konyaka noma emibili ubudala ithuba alisekho. - UScott Roberts
Amabhizinisi amancane zidalelwe ukuvikela izifunda ezifana neCalifornia ne-Michigan ezinkampanini "ezinkulu ze-cannabis" ezifuna ukwenza ngamandla imakethe ye-cannabis
Imithetho ye-canabis iyinkimbinkimbi edumile kodwa kubalulekile ukwazi amalungelo akho njengomthengi nomhlali. Noma ngabe ungusomabhizinisi noma umthengi ojwayelekile, ungalokothi unqikaze ukufinyelela kummeli ukuze uthole ukucaciselwa nokuqondiswa. Izakhamizi zaseMichigan ezingaphezulu kweminyaka engama-21 zinga:
Ungakusiza Kanjani Ummeli Wensangu YaseMichigan?
Izinhlobo Zamalayisense Amabhizinisi E-Cannabis eMichigan
Xhumana nommeli we-Cannabis eMichigan
Ungaphuthelwa owethu Imephu Yezomthetho Yensangu lapho ungapheqa khona isimo samanje semithetho kuzo zonke izifundazwe e-United States bese ubona konke okuthunyelwe kukho ngakunye.